Ibhodi yamabali okanye ibhodi yamabali yesiqendu somdlalo weTrone | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umdlalo weZihlalo zobukhosi luthotho lwefashoni apho abalinganiswa babulawa ngokungenalusini kwaye apho ixesha ngalinye lidibanisa izigidi zababukeli kwihlabathi liphela ukuze bazi ukuba ziintoni ezikufutshane neeKumkani ezisixhenxe.
Kwiiveki ezimbalwa esiza kuba nazo phambi kwethu ixesha lesithandathu lolu luhlu lukhulu namhlanje sinethamsanqa kulo yazi ibhodi yamabali okanye ibhodi yamabali Ukusuka kwesinye seziqendu zakhe. Sisiqendu sesithoba sexesha lesihlanu esinethamsanqa lokusondela kubulelwe yena, uAdrien Van Viersen.
Uthotho olubalaseleyo olulandela izintso zeJRR Martin ukuya yazi ikamva leStarks, Lannister okanye ukuba uDaenerys uya kuba nakho ukuthatha into eyayisakuba yintsapho yakhe, itrone yeeKumkani ezisixhenxe.
Le bhodi yamabali okanye ibhodi yamabali ibikhona Kuthunyelwe nguAdrien Van Viersen kwiwebhusayithi yayo. Ibhodi yamabali ephawula zonke izigcawu kunye neenqwelomoya kwaye ophetheyo ukunika lonke ulwazi olwaneleyo ukuze kurekhodwe isiqendu esipheleleyo. Umzobi onje ngoVan Viersen ngoyena mntu uphethe ulwimi lwecinematographic ke yena ophetheyo ekubumbeni lonke iqela lemveliso.
Ungafikelela kwibhodi yamabali epheleleyo kwiwebhusayithi yabo kweli qhagamshelo. Ibhodi yamabali leyo idinga ubuchule obukhulu bokuzoba kunye nembono enkulu ye-cinematographic ukubonisa iskripthi esibhaliweyo kwizigcawu ezifanelekileyo ngaphandle kokuphulukana nentambo kunye nesenzo maxa onke. Inokwenza kakhulu neekomikhi, ke ingcali yekhathuni iya kuyazi indlela yokuyiphatha.
Ithuba elikhethekileyo lokwazi ukuba kukho ntoni ngasemva kwaloo manqaku matye kamabonakude oko kusenze sonke sibambeke kakuhle silinde ixesha lesithandathu ukuba lifike ukuze sazi ukuba izakusizisela ntoni ngeStarks, Lannisters kunye nabanye abadlali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Le yibhodi yamabali yenye yeziganeko zeMidlalo yeTrone